▷ 🎮 Ọkụ ọkụ ikpeazụ 【Ntụle na nbudata ✅】 - 【Ntụnyere】 2022
🎮 Ọkụ ikpeazụ 【Ntụle na budata ✅】
Ihe njikwa dakọtara maka Mgbanwe/ Gbanwee Lite/ Gbanwee OLED, Onye njikwa Bluetooth Pro wireless wireless…
The ikpeazụ Campfire bụ egwuregwu mgbaghoju anya dị ntụsara ahụ nke nwere obere mgbagwoju anya dị iche iche na-eju afọ.
Enweghị otu isiokwu dị na egwuregwu mgbaghoju anya Campfire ikpeazụ. N'ezie, ọnweghị oghere dị iche iche ebe mgbagwoju anya dị. Kama nke ahụ, ihe niile a na-eme egwuregwu mgbagwoju anya mara mma bụ naanị otu egwuregwu mgbagwoju anya e wuru n'elu nke ọzọ. N'agbanyeghị nke a, The Last Campfire abụghị naanị mgbagwoju anya mgbe mgbagwoju anya. Ọ bụ akụkọ na-emetụ n'ahụ nke inyere ndị ọzọ aka ka ị na-achọta ụzọ gị, na mgbe ụfọdụ ị na-anabata na ọ bụghị onye ọ bụla nke yiri ka ọ dị njikere ịga n'ihu na-achọ ntinye n'akụkụ ahụ.
Ị na-egwu dị ka Ember, obere ihe mkpuchi furu efu n'ime ụwa dị n'etiti ụwa. Mgbe ụfọdụ ihe ndabara gasịrị, ị ga-ahụ onwe gị kpam kpam pụọ n'ụzọ i bu n'obi, na-achọ ụzọ ịlaghachi n'ọnụ ụzọ ámá nke kpasuru gị iwe. A na-agbasasị obere ọkụ ọkụ n'ime njem gị niile, nke ọ bụla dị n'etiti etiti biomes dị iche iche bụ ebe obibi nke ọtụtụ agwa ndị ọzọ chọrọ enyemaka gị. Mkpụrụ obi ndị a furu efu nke a maara dị ka enweghị enyemaka ahapụla olile anya ịhapụ ụwa a, na-amanye gị inyere ha aka imeri egwu na obi abụọ na-egbochi ha.
Onye ọ bụla na-egosipụta dị ka egwuregwu mgbagwoju anya nwere isiokwu pụrụ iche. Ụfọdụ egwuregwu mgbagwoju anya na-agụnye ibugharị ihe site na ọkwa gaa na ngbanwe dị arọ, ịnyagharị chasms, na ihe ebuli elu. Ndị ọzọ na-achọ ka ị dowe obere ọkụ na-ere site na labyrinth nke nwere ihe egwu ifufe ma ọ bụ, n'ụzọ ezi uche dị na ya, gbanye ngọngọ ka ọkụ ọkụ dị nso na-emenyụghị ọkụ ahụ. Mgbagwoju anya dịgasị iche iche na-adọrọ mmasị, dịkwa ka atụmatụ ha na-eme ka ọ dị mfe nghọta. Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ilu dị na The Last Campfire na-akpasu iwe, mana onye nke ọ bụla na-ejisie ike ịkpalite echiche nke mmezu banyere ngwọta ha.
Isiokwu egwuregwu mgbagwoju anya na-egosipụtakwa nsogbu nke ndị na-eme ihe nkiri na-ebuba ha, na nke ọ bụla n'ime ihe mgbagwoju anya na-apụta dị ka ìhè nke uche ha. Akụkọ nta ndị a na-emepe ka ị na-aga na azịza gị, yana ụdị akụkọ ọdịnala na-enye ọnọdụ na-adọrọ mmasị maka omume gị ọ bụla. Dị ka ihe atụ, otu rọbọt nchara nke na-enwebu ike ichetụ n'echiche hụrụ na ire ọkụ okike ya na-ebelata, ihe mgbagwoju anya na-eduzi gị gaa n'obere ọkụ ahụ ma na-enyere aka ịgbanye ya n'ọkụ na-ebigbọ. N'aka nke ọzọ, echiche nke enweghị ebe obibi na-echegbu onwe ya na-egosipụta dị ka mgbagha gbagọrọ agbagọ nke ọkpọkọ na-ezughị ezu, na-arịọ gị ka ịchọta ụzọ doro anya site na mgbagwoju anya. N'agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ akụkọ dị ukwuu, enwere m mmetụta nke onye ọ bụla manyere m, ọ bụ ezie na mkpụmkpụ ha mere ka m chọọ inwe ohere inyocha nke ọ bụla n'ihu.
Ọkụkụ ikpeazụ ahụ nwekwara ụfọdụ njide, yana ọtụtụ agwa na-ajụ enyemaka Ember. Ozi ya abụghị nke ukwuu na nsogbu ọ bụla nwere ihe ngwọta, kama na ihe ngwọta n'onwe ha kwesịrị ichebara nke ọma echiche tupu ha anwale ha. Ụfọdụ ndị agwa na The Last Campfire anọghị n'ọkwa ebe ha dị njikere ịnakwere enyemaka Ember, ọ na-ewutekwa egwuregwu ahụ n'ụzọ na-anabata ya.
Onye ọ bụla n'ime obere ebe a na-edebe ihe odide ndị a na akụkọ ha bụ ụlọ mgbagwoju anya n'onwe ya, na-enye nsogbu ndị dị mgbagwoju anya iji dozie. Ụfọdụ n'ime egwuregwu mgbagwoju anya ndị a na-egwu egwu dị ka egwuregwu ịgba egwu, ebe ị ga-achọ ihe ụfọdụ iji dozie nsogbu, dị ka inye nnukwu frog na nnukwu irighiri na-esi ísì ụtọ iji nye gị ụzọ gaa ebe ọhụrụ. Ọ bụ ezie na ha na-ewere ọnọdụ na mpaghara buru ibu, a na-edobe ihe ngwọta maka mgbagwoju anya ndị a n'ụzọ kwụ ọtọ, na-enye ndụmọdụ na-enye aka iji duzie gị na ngwọta ma ọ bụrụ na ị rapaara onwe gị. Ihe ngosi ndị ahụ anaghị emebi ihe ọchị nke ịchọta ngwọta n'onwe gị, mana ha na-enyere aka na-atụ gị aka n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ị gafeela mpaghara ahụ wee hapụ ụzọ zoro ezo, zoro ezo.
Mgbagwoju anya ndị ọzọ dị mgbagwoju anya na ngosi ma bụrụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma Campfire ikpeazụ nwere inye. Oke ọhịa na-enweghị isi pụtara ebe a, nwere usoro yiri nke ahụ a chọtara na The Legend of Zelda: Link's Awakening, mana ya na igwe ọrụ ya na-agaghị echefu echefu. Kama iburu ụzọ ziri ezi n'isi n'isi ụzọ dị iche iche nke alụlụ ọgụ, ị ga-emerịrị site na ha ịchọ mkpụrụ ego dị na maapụ nkume etiti. Site na nchọpụta nke ime ụlọ ọhụrụ ọ bụla, ị nwere ike ịchịkwa ụzọ nke ọnụ ụzọ ndị gbara gị gburugburu, na-emepụta ụzọ na-aga ebe ọhụrụ ndị na-adịghị abanye na mbụ. Mana dị ka egwuregwu mgbagwoju anya ya pere mpe, nke nwere onwe ya, The Last Campfire na-edozi ihe isi ike ya na egwuregwu egwuregwu ndị a buru ibu, jiri nwayọ na-ama gị aka mana ka na-akọwa ebumnuche nke mgbaghoju anya ọ bụla yana ụzọ ị ga-esi dozie ya.
Ịchọgharị biomes nke ọ bụla bụkwa ihe na-enye obi ụtọ maka atụmatụ agba dị egwu na imewe ụwa mara mma nke The Campfire Ikpeazụ. Ihe odide ya sitere na ịma mma ruo na-awụ akpata oyi n'ahụ, ya na onye na-esi nri na-anabata nke ọma na-akwadebe stew dị ụtọ n'elu nnukwu ite ojii nke edobere n'elu nnụnụ dị elu nke dị n'oche nkume oyi nke na-akpali gị ịhapụ njem gị n'akụkụ. Ọ dị mfe ịbanye n'ime ụwa omimi nke The Last Campfire, mana okwu arụmọrụ na-emebi amara ya mgbe ụfọdụ. Na Nintendo Switch, ọnụego etiti ahụ na-akwụsịkarị n'oge mgbanwe site na ụwa buru ibu gaa na egwuregwu egwuregwu nọọrọ onwe ya, ebe ọ na-apụ n'ụzọ enweghị atụ site na obere mpaghara efu. Ọ bụghị ihe amachibidoro egwuregwu iji nwayọ nwayọ, mana ọ na-ewekarị iwe nke ukwuu.
Mana mgbe The Last Campfire wows, nke na-eme ọtụtụ oge, ọ na-esiri ike ịghara imikpu n'ime ọsọ ọsọ ya na-edozi egwuregwu mgbagwoju anya. Ọ dịghị mgbe ọ gafefe nnabata ya ma ọ bụ na-akpali echiche mgbagwoju anya gafere oke ya, na-ahapụ nke ọ bụla ịhapụ echiche n'agbanyeghị na ha dị mkpụmkpụ. Akụkọ nke The Last Campfire na-akọwa nke ọ bụla n'ime ha na obere akụkọ, na-eme ka echiche gị mejupụta oghere nke ụwa ha n'etiti ụwa megide ndabere nke ihe oyiyi ha mara mma. Ọ na-abụ ahụmihe na-atụrụ ndụ mgbe niile.
Ebe ị ga-ebudata Ọkụkụ Ọkụ ikpeazụ
Onye Na-abịa - Oge 9
Amazon Prime Video (Video na-achọ); Laura Caballero (Onye nduzi)